Grenada နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် Grenada ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို -
● Grenada မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
●အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
အကောင်းဆုံး ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း နှင့်ရှေ့နေများ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများ Grenada ရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Grenada တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသား၊ ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဂရီနာဒါတွင်စီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဂရီနာဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ pas Grenada ရှိအားကစားအစီအစဉ်များ၊ Grenada တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Grenada တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့် Grenada ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Grenada ရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံသား Grenada နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယ Grenada မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဂရီနာဒါတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဂရီနာဒါရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂရီနာဒါရှိရွှေဗီဇာ၊ ဂရီနာဒါရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဂရီနာဒါရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဂရီနာဒါတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ဂရီဒါတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ Grenada တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့် Grenada ရှိရွှေဗီဇာ၊ Grenada ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ Grenada ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ Grenada ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Grenada တွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: အမေရိကန်ဒေါ်လာ 150,000
ဂရီနာဒါသည်ကာရေဘီယန်တောင်ပိုင်းတွင်ရှိပြီးအီကွေတာ၏မြောက်ဘက် ၁၂ ဒီဂရီနှင့်မုန်တိုင်းခါးပတ်အောက်၌ရှိသည်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများသည်အဆန်းမဟုတ်ချေ။ ၎င်းသည်တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိပြီးမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောကက်စကိတ် ၁၀ ခုနှင့်ပြည့်စုံသောမိုးသစ်တောရှိသည်။ ကျွန်း၏ကြမ်းတမ်းသောကမ်းရိုးတန်းနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများသည်အတ္တလန္တိတ်ဘက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုwavesရာမလှိုင်းလုံးများမှအကာအကွယ်ပေးပြီးကာရစ်ဘီယံဘက်မှတိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။ ကျွန်း၏ထက်ဝက်ကျော်သည်အပြစ်ကင်းသောသစ်သားများဖြစ်ပြီးကျန်သစ်တောနယ်မြေများမှာလူနေထူထပ်စွာရှိသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုရှုခင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်နေရာတစ်ခုလုံးတွင်အံ့သြဖွယ်ရာအမြင်များရှိသည်။ လှပသောချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်တောက်ပနေသောသမုဒ္ဒရာ၏လှပသောမြင်ကွင်းများသည်မလှုပ်မယှက်ဖြစ်နေသောပထဝီအနေအထားကိုလမ်းများတစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တန်းများ၊ ပုံမှန်ဘ ၀ ပျက်ခြင်းမရှိသော်လည်းဂရီနာဒါသည်ကာရေဘီယန်ဒေသရှိဒေသတွင်းအခြေချထားသောရေစိုခံပင်လယ်ရေလိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Leatherback ပင်လယ်လိပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးတွားသွားသတ္တဝါဖြစ်သည်။ အရှည် ၆ ပေအထိမြင့်ပြီးပေါင် ၂၀၀၀ အထိအလေးချိန်ရှိသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်း ၇၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ အကွာအဝေးရှိကျွန်း၏မြောက်ဘက်အပိုင်းအစတွင်နေရာယူထားသည်။ ဒေသခံများသာမကကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှပါ ၀ င်သူများသည်ဤထူးခြားသည့်အခါသမယကိုလေ့လာရန်နှင့်ဤပျက်စီးနေသောမျိုးစိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်သားရန်၊ လေ့လာရန်နှင့်စုဆောင်းရန်လာရောက်ကြသည်။
သဘာဝကျွန်းသည်ဤကျွန်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ သို့သော်ထိုနည်းတူစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစက်အပြောက်များလည်းရှိသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ မတူကွဲပြားသောအပြေးပြိုင်ပွဲများ၊ အမျိုးသားပြတိုက်၊ သို့သော်ခေတ်နောက်ကျသော်လည်းအလုပ်လုပ်သောရမ်သန့်စင်စက်ရုံ၊ လှပသောဥယျာဉ်များ၊ ကိုကိုး၊ အခွံမာသီးများနှင့်အရသာအမျိုးမျိုး၊ Grenada သည်အကောင်းဆုံးရေကူးခြင်းနှင့် Bianca C ၏ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေသအပါအ ၀ င်makingရိယာကိုကျဆင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကာရစ်ဘီယံတိုက်တန်းနစ်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနစ်မြုပ်နေသောစံပြဥယျာဉ်၏နေရာလည်းဖြစ်သည်။ Grenada သည်လှေတစ်စင်းအတွက်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကာကွယ်မှုကို ၀ ယ်ယူရန်စဉ်း စား၍ ရသောကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လူအများအပြားသည်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရာသီတွင်ဂရီနာဒါတွင်သူတို့၏လှေများကိုဆိုက်ကပ်ကြသည်။ ကြီးမားသော၊ တည်ဆောက်ထားသောရွက်လှေ / ခရုဇ်ကွန်ယက်တစ်ခုရှိပါသည်။ Marinas ရှစ်ခုသည်ပေ ၃၀၀ အထိရှိသည့် superyachts များအထိလှေငယ်များအတွက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။
အနိုင်ရရှိသောကုန်သွယ်ရေးလေများကအပူချိန် ၇၀ နှင့် ၈၈ ဒီဂရီ (ပုံမှန် ၇၇ မှ ၈၁ ဒီဂရီ) အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီးတောက်ပသောရာသီကိုစိမ်းလန်းသောရာသီဟုသိနိုင်သည်။ Aprilပြီလမှနို ၀ င်ဘာလအထိရက်အနည်းငယ်မိုးရွာသွန်းမှုရှိသော်လည်းမိုးရေသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ မိနစ်အောက်သာခံနိုင်သည်။ ဂရာနဒီးယန်းများသည်များသောအားဖြင့်အချိန်အနည်းငယ်အကာအကွယ်ပေးသည့်အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်၊ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိသတင်းများနှင့်အချိန်ပျောက်ဆုံးသွားသည်၊ ထို့နောက်နေဝင်သောအခါသူတို့၏လမ်းကိုဆက်သွားသည်။ သင်မိုးသစ်တောသို့နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး ပို၍ မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။
The Capital City, စိန့်ဂျော့ဂ်ျ၏, စီးပွားရေးနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းများအတွက်စည်ကားနေသောနေရာဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ ၅၈% သည်ကျွန်း၏အဓိကမြို့တော်ဖြစ်သောစိန့်ဂျော့ဂ်ျသို့မဟုတ်ဂရင်ဗီးလ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ယခင်ပုပ်များအပါအ ၀ င်အခြားအများစုသည်ကမ်းရိုးတန်းအနီးသို့မဟုတ်အနီးတွင်နေထိုင်ကြသည်။ Grenadians တွေဟာပွင့်လင်းပြီးဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်။ သူတို့ရဲ့အလင်းရောင်ဟာတွန်းလှန်လို့မရဘူး။ လူတိုင်းကသူတို့၏တစ်နေ့တာနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအခြားသူတစ် ဦး နှင့်သင့်လျော်စွာသိကျွမ်းစေသည်။ သင်အောင်မြင်မှုရရန်အလားအလာအလားအလာနှင့်အသစ်သောတစ် ဦး ချင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များတွင်သူတို့ကအလွန်နံနက်ခင်းကိုဖော်ပြသည်။ မင်းသွားလေရာလူတိုင်းကမင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆန္ဒပြုတဲ့အခါကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆက်နေရန်ခက်ခဲသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကအနီးအနားကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်မတို့အဲဒီမှာအစာစားနိုင်မနိုင်စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က“ ငါတို့ဒီနေ့ပိတ်ထားကြပြီ။ မင်းကမင်းကိုလှည့်စားလိမ့်မယ်။ ဤအသင်းမျိုးသည်ဂရီနာဒါတွင်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကူညီရန်အထူးကြိုးပမ်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ်ကိုလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ချန်ထားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့တာယာကိုပွင့်လင်း။ လေးနက်သောသေတ္တာချောင်းထဲသို့မတော်တဆပစ်ချလိုက်သည်။ ယာဉ်အရိုးစုသည်ကတ္တရာပေါ်တွင်တင်နေသည်။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းဘာလုပ်ရမှန်းခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်, ဂရီနာဒန်အမျိုးသားလေးယောက်ကျော်ထိမိ။ လဲလဲ, ငါတို့မော်တော်ယာဉ်တယ်ပြန်ပြန်။ ခန့်ထား, ပါးပျဉ်းပုတ်, ငါတို့လမ်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီလွှဲ။
ငါမိုးသစ်တောမှတဆင့်အခြားလမ်းအကြံပြုသောအခါငါတို့ရှုံးနိမ့်တဲ့အချိန်ထို့အပြင်ရှိခဲ့သည်။ လမ်းပြသည်မြို့ထဲသို့တိုက်ရိုက်သွားသည်။ ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေတုန်းသင်တန်းကအရမ်းတင်းကျပ်လာပြီးဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ တောင်၏သက်တန့်ပစ္စည်းသည်ဘယ်ဘက်တွင်ရှိပြီးညာဘက်ခြမ်းမှပြိုကွဲသွားသောဖြူဖွေးဖြူလေးသည်။ လမ်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေတာကိုငါတို့တွေးနေတုန်းမှာစကားလုံးတစ်လုံးကလူတစ်ယောက်ကိုချုံဖုတ်ကနေပေါ်လာပြီး“ ရည်းစားရယ်၊ ဘုရားသခင့်စကားနားမထောင်တဲ့နေရာမှာမင်းဘာလုပ်နေတာလဲ” သူကရယ်မောရွှင်လန်းစွာနဲ့လမ်းပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာလုံခြုံမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်မှုဆီပြန်လှည့်လာစေခဲ့တယ်။ ဤကွန်ယက်၏ခံစားချက်နှင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုသည်ကျွန်းအားကပ်ဘေးကျရောက်စေသည်။
Grenadians များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘဝကိုကိုင်တွယ်ရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘဝသည်ရုန်းကန်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားထောက်ပံ့ရန်ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိကြသည်။ ၎င်းသည်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းဘာမှမဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခြားမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားပါ။ မနက်ဖြန်သူတို့လာမလားဆိုတာသင်မေးမြန်းလျှင်၊ သင့်တော်သောတုံ့ပြန်မှုသည်“ အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပါ” သို့မဟုတ်“ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ” သည်တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။
အမွေနှင့်စည်းဝေးကြီးများသိသာဖြစ်ကြသည်။ Grenadians သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆွဲဆောင်နေစဉ်အတွင်းဤကျွန်းဝတ္ထုကိုရှင်သန်နေစေရန်နှင့်စွမ်းအင်ပြည့်ဝစေရန်အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားကြိုးပမ်းစဉ်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများဖြစ်သော Carnival, Pageantry၊ သမားရိုးကျအနုပညာလက်ရာများ၊ ပန်ဂီတ၊ အာဖရိကရွေ့လျားမှုနှင့်စည်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည့် Calypso သီချင်းများကိုလုံးဝဂုဏ်ပြုကြသည်။ တိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။
ဂရန်းဒီးယန်းလူမျိုးများသည်သူတို့၏အိမ်နီးချင်းအစားအစာဆိုင်ရာစည်းဝေးကြီးများကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အထူးသဖြင့်လူသိများသောအများပြည်သူသုံးစားသောက်ဆိုင်၊ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာအုန်းသီး၊ ငါး၊ ကြက်၊ callaloo၊ ဖက်ထုပ်နှင့်အရသာအရသာသုံးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကို၎င်း၏ငံပြာရည်အဖြစ်ချက်ပြုတ်သည့်အုန်းသီးမှရရှိသည်။ ၎င်းသည်မှတ်သားလောက်ဖွယ်၊ ယုံကြည်ထိုက်သောဟင်းလျာများအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အာဖရိက၊ ပြင်သစ်နှင့်အိန္ဒိယအစားအစာများနှင့်အရသာများသည်အနီးအနားရှိအစားအစာများကိုအရသာရှိစေသည်။
Grenada သည်အရသာများပြားသောကြောင့် Spice Island ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အခွံမာသီး ၃၃% ကိုဖြန့်ဝေပေးပြီး၎င်း၏မွှေးကြိုင်သောရနံ့နှင့်နွေးထွေးသောမျက်နှာပြင်ကြောင့်လူအများစုကအကောင်းဆုံးဟုယူမှတ်ကြသည်။ Nutmeg သည် Grenada ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအများပြည်သူအလံနှင့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံအစီအစဉ်တွင်ပြောထားသည်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ နေးဒါ
နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်နှစ်မျိုးခံစားခွင့်ကို Grenada နိုင်ငံသားများအတွက်ခွင့်ပြုထားသည်
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ Grenada ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၀, ဝဝဝအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (အကန့်အသတ်ဖြင့်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ အမျိုးသားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရန်ပုံငွေမှလှူဒါန်းခြင်း (ပြန်အမ်းမရ)
ဘာကြောင့် Grenada ကိုရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်သင့်တာလဲ
Grenada သည်ဒေသအတွင်းရှိသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Grenada သည်သင့်အားယူအက်စ်အေသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချရန်မဟုတ်သောဗီဇာရရှိရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်သို့ဗီဇာမဲ့ခရီးသွားသည့်ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတစ်ခုတည်းလည်းဖြစ်သည်။ Grenada ၏နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ မိသားစုဝင်မိသားစုဝင်များလျှောက်ထားနိုင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအခွန်လွတ် ၀ င်ငွေရရှိခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအစီအစဉ်များတွင်အားသာချက်များရှိသည်။ Grenada သည်ကာရစ်ဘီယံအစီအစဉ်အားလုံး၏အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Grenadian နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်၏မိသားစု ၀ င်များသို့တိုးချဲ့ရန်မလွယ်ကူပါ။ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၊ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ငွေကြေးအရမှီခိုနေသောကလေးများနှင့်အသက် ၆၅ နှစ်အောက်မှီခိုနေသောမိဘများပင်ပါဝင်နိုင်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ insite
Grenada ၏နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်အလျင်မြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ကို ၃-၄ လအတွင်းရနိုင်သည်။ သင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Grenadian နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရရှိရန်ငွေပြန်အမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤရွေးချယ်မှုသည်အမြန်ဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအာမခံသည် - ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူညီချက်ပြီးရက်ပေါင်း ၆၀ ခန့်တွင်ပြုလုပ်ပြီးသင်၏ပတ်စ်ပို့သည်နောက်ထပ် ၁၀ ရက်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်မည်။
နောက်ရွေးချယ်စရာမှာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ အချိန်အပိုင်းအခြားသည်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းတိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
လျှောက်လွှာတင်နေစဉ်၊ သင်သည် Grenada သို့သွားရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလက်ခံသောအခါ၊ ဂရီနာဒါပြင်ပတွင်နေထိုင်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် - သင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုတော့ပေ။
National Transformation Fund သို့အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ လှူဒါန်းခြင်းသည် Grenadian နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရရှိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်ခြံမြေအကျိုးအမြတ်ကိုရွေးချယ်ပါကအစိုးရမှအတည်ပြုထားသောစီမံကိန်းမှအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၃၅၀,၀၀၀ ဖြင့်အိမ်ခြံမြေများကို ၀ ယ်ယူပြီးအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားရမည်။
အိမ်ခြံမြေရွေးချယ်ရန်အတွက်လူလေးယောက်မှစဉ်းစားသောမိသားစုတစ်စုအတွက်အစိုးရအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ထပ်တိုးကောက်ခံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂရီနာဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှဖြစ်သည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဂရီနာဒါအတွက် ဂရီနာဒါရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဂရီနာဒါမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံတွင်အခြေချနေထိုင်သည့်ဂရီနာဒါနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Grenada မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Grenada မှ Golden Visa သို့မဟုတ် Grenada မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ Grenada မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည် ဂရီနာဒါသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဂရီနာဒါရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့် Grenada အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ Grenada အတွက်, Grenada အတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ, Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသား, Grenada များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်နိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့် Grenada များအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
Grenada မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂရီနာဒါတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ဂရီနာဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
Grenada မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ဂရီနာဒါတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
Grenada မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဂရီနာဒါမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
Grenada မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အထူးနိုင်ငံသား။
အိမ်ခြံမြေမှတဆင့် Grenada ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
ဂရီနာဒါတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှကောင်းသောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ဂရီနာဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာလိုသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့သည်။ Grenada ရှိကောင်းမွန်သောအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် Grenada ရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
Grenada ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Grenada အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Grenada နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကသင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည် Grenada မှသို့မဟုတ် Grenada သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Grenada နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအား Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားပြုမှုကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကန ဦး လျစ်လျူရှုသော Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
Grenada အတွက်လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်သောရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသောအခါ၊ ၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Grenada ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Grenada မှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကုန်သည်များ (သို့) ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Grenada တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် Grenada သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းအားဖြင့် Grenada တွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဂရီနာဒါအတွက် ဂရီနာဒါရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Grenada ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဂရီနာဒါတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်နေသောဂရန်းဒါးအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဂရီနာဒါအားထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဂရီနာဒါအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဂရီနာဒါအတွက် Grenada ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက နေးဒါ ဂရီနာဒါရှိအပြာစာပေတွင်ကြည့်ရှုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဂရီနာဒါအတွက်ရှေ့ရပျ Grenada ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည် Grenada နှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ Grenada ရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့များဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Grenada ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများအရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Grenada အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကို Grenada အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေသောနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကို Grenada သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
ဂရီနာဒါအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဂရီနာဒါအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိသောနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိသစ္စာပြုထားသည့် Grenada ကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရှေ့ရွက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု Grenada မတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် Grenada အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Grenada အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကူညီခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
အကယ်၍ သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Grenada အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါ ၀ င်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဂရီနာဒါအတွက်
ယာယီနေထိုင်ခွင့် Grenada မှာ
ကျနော်တို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျနော်တို့ Grenada အတွက်ပေးအပ်သောနောက်ထပ်န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်စာရင်းပြုစုကြပါပြီ။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Grenada အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ Grenada တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့် Grenada တွင်လည်းစီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသည်။ ၎င်းကို Grenada အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့ကို Grenada နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်စီစဉ်ပေးသည်။
ဂရီနာဒါအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့် Grenada ရှိနှင့်နိုင်ငံတကာမှကူညီခြင်းဖြင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Grenada တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Grenada တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ )
Grenada သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဂရီနာဒါတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဂရီနာဒါရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် Grenada မှာအကြံဥာဏ်တောင်းခံဖို့လိုပါတယ် ဂရီနာဒါတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းနည်းများ Grenada ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သင်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂရီနာဒါ Grenada ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် Grenada မှာလက်ငင်းစတင်ဘို့။
Grenada ရှိ HR ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ Grenada ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Grenada တွင်နေရာလွတ်တင်ပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Grenada အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Grenada အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များနှင့်အတူ Grenada အတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, Grenada အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
Grenada ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း နေးဒါ.
Grenada တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ဂရီနာဒါတွင် web ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
ဂရီနာဒါတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Grenada ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Grenada ရှိ App Development
ဂရီနာဒါတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Grenada ရှိ SEO
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရီနာဒါအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂရီနာဒါအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ Grenada တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဂရီနာဒါတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုရရှိနိုင်သည်၊
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်ရန် Grenada အတွက်ရှေ့နေအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်။ သင် Grenada သို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ် Grenada သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ Grenada အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေကို Grenada ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ရ်ှတန်လ်လ်သို့မဟုတ်ဂရင်နာဒါကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကို Grenada ၏စီးပွားရေးတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Grenada ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း, Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ခဲ့သည် Grenada မှာ။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Grenada ရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် Grenada ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Grenada ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Grenada တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှနိုင်ငံသားကထောက်ပံ့သော Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံမှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ Grenada ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဂရီနာဒါရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
Grenada အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ Grenada ရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Grenada ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Grenada ရှိတတ်နိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Grenada အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး Grenada အတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
Grenada ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအိမ်ရာမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့် Grenada ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Grenada ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Grenada မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်လျှောက်ထားသည်။ Grenada အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂရီနာနာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဂရင်နာတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဂရီနာဒါအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဂရီနာဒါတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဂရီနာဒါရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ဂရီနာဒါအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု Grenada ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ Grenada ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ Grenada ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ Grenada အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
Grenada ရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေများကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများအားဖြင့် Grenada ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Grenada ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Grenada သို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ Grenada ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ Grenada ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့် Grenada အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ Grenada ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအေးဂျင့်များနှင့် Grenada ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် Grenada အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ဂrenadaအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | Grenada ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ Grenada ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂရီနာဒါရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဂrenadaအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဂရီနာဒါတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
Grenada ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် Grenada အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုစသည်တို့သည်မြင့်မားသောအသားတင်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအခြားထောက်ပံ့မှုများစွာပေးပါသည်။
Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ် Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့်မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလဲ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအာရှမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံမှအာဖရိကမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ နိုင်ငံမှတောင်မှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ဥပမာနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်နိုင်ငံမှနိုင်ငံသားများမှအသုံးပြုနိုင်သည်။ မလေးရှားမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိန္ဒိယမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှ Grenada သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Grenada ၏အစိုးရတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - www.gov.gd
Grenada ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးအသင်း www.gogrenada.gd
ဂရီနာဒါခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - www.grenadagrenadines.com
တရားဝင် Grenada နိုင်ငံသားဖြစ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန | ဂရီနာဒါအစိုးရ
link ကိုမှ Grenada ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဂရီနာဒါတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိ
နိုင်ငံသား ၃၈ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။ ဆက်သွယ်ရန်